ग्यालरी Archives - Page2of9- Nepal News Post::Nepal News Post, online news portal
Most beautiful Wisteria (藤花 ) Photo Gallery
Tokyo / Sumi Lamichhane :Wisteria isagenus of flowering plants in the legume family, Fabaceae, that includes ten species of woody climbing bines that are native to China, Korea, and Japan and as an introduced species to the Eastern United States. Some species are popular ornamental plants. ...
नेपालका यि सम्पदाहरु हेर्नुहोस्, जसलाई हेरि विश्वले जिब्रो टोक्छन् ( फोटो- नेपाल)
साँच्चै जापानमा, साकुरा ( 桜) नेपालबाटै ल्याईएको हो त ?(भिडियो सहित)
टोकियो । हरेक वर्ष जापानमा वसन्त ऋतुको बहार बनेर आउने गर्दछ साकुरा( 桜) सिजन । जापानीहरु मात्रै नभएर लाखौँ विदेशी पर्यटकहरु पनि यहि साकुरा हेर्न जापान आउने गर्दछन् । हामी जस्ता यहिँ वसोवास गरिरहेकाहरु त झनै यसै पनि रमि हाल्छौँ नै । वर्तमान जापानमा साकुरा केवल राष्ट्रिय फूलमात्रै होईन गतिलो आम्दानीको स्रोत पनि बनेको छ । वास्तवमा कहिलेबाट अनि...
यि यस्ता तस्बिर जो कसैलाई कृषीकर्मप्रति लालायित गरिदिन्छ ( फोटो)
काठमाडौँ । यि यस्ता तस्बिर जो कसैलाई कृषीकर्मप्रति लालायित गरिदिन्छ । ...
हेर्नुहोस् ब्युटिफुल गायिका निक्की कार्कीको ग्लामरस रुप ( फोटो फिचर)
हेर्नुहोस् ब्युटिफुल गायिका निक्की कार्कीको ग्लामरस रुप ...
आरुका राता फूलहरु …( फोटो )
टोकियोमा, भेटिएको आरुको फूल, घरदेश छाडेपछि स्मृतीमा रहेका हरेक चिजहरु खास लाग्दछन् । तस्बिर: RSphotography ...
रमेश कुमार श्रेष्ठको ‘नम्बरी चप्पल’ सार्वजनिक( हेर्नुहोस् भिडियो)
सौल/दक्षिण कोरिया । गायक रमेश कुमार श्रेष्ठको ‘ नम्बरी चप्पल ‘ OSR Digital को यु ट्युब च्यानल मार्फत सार्वजनिक भएको छ। रमेश कुमार श्रेष्ठको एकल स्वर रहेको सो गीतमा कृष्णकुमार राईको शब्द रचना र संगीत रहेको छ । सो म्युजिक भिडियोलाई शिशिर श्रेष्ठले निर्देशन गरेका हुन् भने निश्चल केसीको कोरियोग्राफी छ । जसमा आँचल शर्मा, सुनील क्षेत्रीको दमदार अभिनय रहेको छ...
गायक रमेश कुमार ‘नम्बरी चप्पल’ सार्वजनिक (हेर्नुहोस् भिडियो)
लालिगुराँसको महिमा भुलेर साकुरामा रम्नु रहर कि कहर ? ( फोटो फिचर)
टोकियो । वसन्त ऋतु सबैको प्रिय ऋतु ! त्यसमा पनि प्रकृतिप्रेमीहरुको लागि त उत्सव नै बनिदिन्छ । जापान भौतिक र प्रविधिको समृद्दीको चरम उत्कर्षमा पुगेको मुलुक भएर पनि यहाँका भौतिक विकास र प्राकृतिक वातावरण विचको सन्तुलन सायद, संसारका अन्य मुलुकहरुमा विरलै पाईन्छ । जापानमा यतिखेर साकुरा ( चेरी ) फुल्ने समय ! यहि समयमा हाम्रो मुलुकमा लालिगुराँस फुल्दछ डाँडै...
फुल्दैछ साकुरा ! वसन्त वहार बोकेर ( फोटो फिचर)
टोकियो । टोकियो अनि यसका आसपास, यो वर्ष साकुरा फुल्ने समय यहि मार्च २१ तारिखदेखि २९ तारिख सम्मलाई अनुमान गरिएको छ । यद्यपी केहि स्थानमा फाट्टफुट्ट फुल्न थालिसकेका छन् । सोमबार टोकियोको योयोगि पार्कमा भेटिएका केहि दृश्यहरु ।तस्बिर : RSphotography ...